प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टेलिफोन वार्तालापको अडियो सार्बजनिक, फोन उठाउने व्यक्ति चकित (अडियो),,, हेर्नुहोस! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टेलिफोन वार्तालापको अडियो सार्बजनिक, फोन उठाउने व्यक्ति चकित (अडियो),,, हेर्नुहोस!
काठमाडौँ। नेपालका अधिकांश नेपाली युवाहरु बैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा देश बाहिर छन । नेपाल कृषिप्रधान देश भनीएता पनि कृषिका उत्पादन खरिद मै वर्षेनी अर्बौ रुपैया देशबाट बाहिरिन्छ ।
देश मै केहि गर्नु पर्छ भन्ने युवाहरु पनि नभएको हैन । तर कत्तिले कृषि पेसा गरेको सुरुवात मै घाटा बेहोरे पछी चटक्कै छोडेर पुन: बैदेशिक रोजगारी वा अन्य पेसामा लागेको प्रसस्तै उदाहरणहरु छन । तर कति युवाहरु भने तन, मन र धन लगाएर दिन रात मेहेनत गरि आफ्नो पसिना आफ्नै माटोमा बगाएर सक्षम भएका उदाहरणहरु पनि छन्।
उनै दिलिप भण्डारीको कृषि कर्मको भिडियो देखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि आकर्षित भएका छन् । प्रधानमन्त्री यति आकर्षित भएकी उहाले दिलिपको अन्तर्वार्ता लिने पत्रकारलाई नै फोन सम्पर्क गरेर प्रोत्साहन दिनु भयो । पत्रकारले तपाई को बोल्नु भयो भनेर सोधेपछि मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो परिचय दिनु भएको थियो।
यहि भिडियो अन्तर्वार्ता पछी प्रभावित हुनु भएको थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली:
Previous सांसद चौधरीको प्रश्न : “सम्धीलाई ७ पटक सम्म मिल्ने, कुलमानलाई दुई पटक पनि नमिल्ने ?” सहमत हुनेले सेयर गरौ।
Next राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित राज्यबाट सुविधा लिने सबैको तलब रोकियो,,, हेर्नुहोस्